कोरल र माछाको लेखको प्रशंसकहरूको लागि इजिप्टमा शीर्ष 10 मा होटलहरू
सबैभन्दा सुन्दर Reef
शर्मामा पहिले नै हर्गाददमा भेला भएको छ, तर म होटलको छेउमा माछाको बरामना हुन चाहन्छु। कसैलाई यी होटलहरू थाहा छ?
म तपाईंलाई हूरत अरेबिया अररा अदुर *, अराबेल ASEU4* मा निम्न होटलहरू भ्रमण गर्न सल्लाह दिन्छु। तर पक्कै पनि कोरलको कोरलसहित, विषालु एल शेखको तुलनामा मूर्त भई डीएचपीयर छन्। यहाँ यो धन कुनै पनि "Gymetmet" को प्रशस्त छ।
मैले थोरै दिन अगाडि घाममा घाम दिनहरूमा केही वर्षअगाईको विश्राम पारें। त्यहाँ कूलहरूको साथ कूल वंश छ, त्यहाँ कोरलहरू छन्। मेरो घडीहरू र म पानीबाट बाहिर निस्के, धेरै रोचक माछा देखे, जुन शरम एल-शेखमा पनि थिएनन्। र म तपाईंलाई सल्लाह दिन्छु, प्रमोदवन टापुमा उत्सुक पार्न यो लगभग $ 20 को लागत छ, यहाँ वास्तवमै लाल समुद्रको रिनवो पानी संसारको अवसरको अवसर हो।
धेरै टुर अपरेटरहरू र डाइभिंग प्रेमीहरू आफ्नै कोरल रीफको साथ हूरका प्रेमीहरूको अनुमानित सूचीको लागि हिसाब गर्न सक्छन्, जहाँ तपाईं कोस्टको नजिक डाइभिंग गर्न सक्नुहुन्छ:
तुरून्त हामी ध्यान दिन्छौं, मिश्रका सबै होटलहरूलाई एउटा लेखमा सुन्दर कोरलसँग लेख्नुहोस् - यो असम्भव छ। र यो धेरै राम्रो छ! यसको मतलब यो छ कि इजिप्टियन भनेको इजिप्टको चित्रणकारी रीफ्स, र डुब्ने वा स्नोर्कलिंगलाई मन पराउने पर्यटकहरू मध्ये एक हो, विशाल चयन।
p> मिश्री होलरहरू हर्गडेडामा कम छन्, तर मिस्रमा पिउने परम्परा र यस रिसोर्टमा राखिएको थियो। यसको जवाफ यो हो कि हर्गाडादको समुद्री किनार बलुवा हो, र किनारमा कोरल चट्टानहरू, जहाँ पाहुनाहरूले प्रशंसा गर्न सक्छन्, कम उज्यालो। यद्यपि, धेरै राम्रो रीफहरू मकदी खाडीमा छन् (हर्गागाहाद) र सफागगा (K0 किलोमिटर) मा छन्। सुविधाका लागि, यी क्षेत्रहरूलाई एकमा एकतामा बाँध्नुहोस्।
अब तपाईलाई सबै प्रश्नहरूको उत्तर थाहा छ - जहाँ हर्गाडाहादमा कोरलहरू छन्, र कोरलका साथ होटलहरू शर्म एल-शेखमा उत्तम हुन्। यो केवल अन्तरपान्त्री फोटोहरूको लागि इजिप्टमा उडान गर्दा मितिहरू छनौट गर्न मात्र बाँकी छ!
नामा खाडी, कृत्रियल समुद्री किनार बेकीमा बालुवाले बनाइएको थियो, र यहाँ कोरलहरु यहाँ एक बिट। मलस्सीहरू द्वारा छोडेको खैरो मृत कोरलबाट लाइभल मललिएका कोरलहरूमा बाँच्नुहोस्। तसर्थ, समुद्र तटहरू बीच होटलहरू बीच, जहाँ त्यहाँ जीवन्त सुन्दर कोरल रीफमा सीधा पहुँचका लागि निम्न सिफारिश गर्न सकिन्छ:
धेरै होटेलहरू कोर र यसका बासिन्दाहरूको सुविधाजनक पहुँचको साथ समुद्री कोरलहरूमा पार हुन्छ।
दक्षिण आकर्षक आकर्षण एल शेख्रिकको रिसोर्ट ठाउँमा हर्गाडाहाद बस्तीहरूमा समुद्रमा चिकनी बलुई सूर्यास्तको साथ। जीवित कोरल रीफहरूको निरीक्षणको लागि, तपाईं डु in ्गामा भ्रमणको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। एकै समयमा, केही होटेलको नजिकको कोरल रीफहरू फेला पार्न सकिन्छ:
कुन सुन्दर कोरल चट्टानको साथ शर्म एल-शेखमा कुन होटलहरू? शर्म एल शेखमा स्नोरलनको लागि उत्तम होटलहरू। शर्म एल शेखको होखेलमा शर्म एल शेखका होटेलमा होटलहरूको छेउमा?
सबै भन्दा राम्रो प्रस्तावहरू र जल्दै गरेको यात्रामा? हाम्रो टेलिग्राम च्यानलको सदस्यता लिनुहोस् र सर्वश्रेष्ठ सुझावहरू प्राप्त गर्नुहोस्!
को साथ शर्म एल-शेख होटलहरू<< p> शर्म एल शेखमा यो होटेललाई विशेष रूपमा फ्यान र फ्लिपरको साथ पकडका लागि खाडलमा डिजाइन गरिएको हो। यो एक विलासी कोरल चट्टान छ। उच्च वर्ग होटेलले तपाईंलाई लगभग एकान्तमा उत्कृष्ट अन्तर पानीमा हेर्न अनुमति दिनेछ। समुद्रको प्रवेशद्वार केवल pontono संग मात्र गरिन्छ। मापन आरामदायी छुट्टीको लागि सिफारिश गरिएको।
र पाठ्यक्रम एक फैशनेबल लोकप्रिय होटेलको बारेमा चम्किलो लोकप्रिय होटेलको बारेमा केहि शब्दहरू भन्नु असम्भव छ, सायद डाइभिंग र स्नडुर्लिंगको लागि। र पर्यटकहरूको साथ मोडिंग याट। होटलको क्षेत्र केवल हरियालीमा डुब्दै छ। होटलको एक राम्रो फाइदा, यसको गुणवत्ता बाहेक, त्यहाँ छुट्टीकहरूको लागि सबै प्रकारका मनोरन्जनको केन्द्र छ। होटल परिवारका छुट्टीको लागि उत्तम छ।
इजिप्ट विश्वका सबैभन्दा लोकप्रिय देशहरू मध्ये एक हो जुन लाखौं पर्यटकहरू प्रत्येक वर्ष आउँछन्। यो देश आश्चर्यजनक प्रकृति, आश्चर्यजनक तनाव, सुपर-आधुनिक सेवा, उत्कृष्ट पूर्वाधार, चित्रकर्मीहरू रिसोर्टको मूल्यमा सस्तो छन्। वास्तवमा, यसको लोकप्रियताको बाबजुद, तपाईं इजिप्टमा एक अपेक्षाकृत थोरै रकमको लागि आराम गर्न सक्नुहुनेछ।
इजिप्टको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण फाइदा भनेको असाधारण कोरल रीफको साथ लाल समुद्र हो। लाल समुद्र पृथ्वीमा सफा मानिन्छ, र यसको तापक्रम शून्य माथिको 1 degrees डिग्री भन्दा तल झर्दैन, त्यसैले यसले वर्षभरि बचत गर्न सक्दछ।
<< p> रातो समुद्रमा एक विशाल प्रजाति माछा र कोरलको विशाल प्रजातिहरूको ठूलो संख्यामा बस्दछ। यो कोरलहरू थिए जुन धेरै पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्दछ, त्यसैले तिनीहरू कोरल रीफ्सको नजिकको राम्रो होटल फेला पार्न चाहन्छन्। तिनीहरूले लामो बिदाको अघि पुस्तक संख्या छ हरेक वर्ष यति सुन्दर कोरल reefs संग मिश्रको सबै भन्दा राम्रो होटल डाइभिङ प्रेमीहरूको बीचमा ठूलो माग आनन्द। तिनीहरूलाई थोरै विचार गर्नुहोस्।
यदि तपाईं शर्म एल-शेखको भ्रमण गर्न जाँदै हुनुहुन्छ र एक राम्रो चट्टानको साथ होटलमा रहन चाहानुहुन्छ, त्यसोभए तपाईंले त्यस्ता संस्थाहरूलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ:
• hyatt repanie * *। यो धेरै समुद्री किनारमा एक भव्य होटल हो। हाटट रेसेन्स 1000 भाडामा लिनेहरू समात्छ र उनीहरूको आरामदायी मनोरन्जनको लागि सबै थोक छ - पौंडी पोखरी, सौना, बिलियर्ड्स, राम्रोसँग सुसज्जित कोठा र अधिक;
• कन्टेन्टल गार्डन रिम रिसोर्स * *। महाद्वीपीय बगैचा पुन: डायट रिसोर्ट एक होटल हो जुन समुद्री किनारमा अवस्थित छ। संस्थाको साझा क्षमता 5500 मानिस हो। होटल पुस्तकालय, टेनिस अदालत, दुई पोखरी, एक शपिंग केन्द्र, एक स्पा र धेरै अधिक;